चुनावी नतिजापछिको चर्चा
स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले ‘साइज’मा आएसँगै मुलुकमा फेरि वामपन्थी गठबन्धन बन्ने चर्चाले कम्युनिस्ट कार्यकर्ता तरंगित बनेका छन् ।
नेकपा छँदै एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरू तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवासमा गएका समाचारका लिंकहरू नयाँ ठानेर निकै शेयर भइरहेका छन् ।
माओवादी कार्यकर्ताले आफूहरूले जितेको र एमालेले हारेको प्रचार गरिरहेका छन् । ‘वाम तालमेल’बारे ताप्के नताते पनि बिँड भने तातिसकेको छ ।
स्थानीय तह चुनावको नतिजाले एमाले कार्यकर्ता रक्षात्मक बन्दा माओवादी कार्यकर्ता उत्साहित देखिएका छन् ।
हुन पनि एमाले नेताहरूले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा माओवादी सिद्धिने खालका अभिव्यक्ति दिए । त्यसविपरीत माओवादीले विगतको चुनावभन्दा अहिले सुधार गर्‍यो । एमालेले झण्डै एक तिहाइ सिट गुमायो । तर, एमालेका नेताहरूले यसलाई हार भनेका छैनन् ।
पछिल्लो समय एमाले नेताहरूले देशको दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै माओवादी लगायतका शक्तिलाई ‘स्याटेलाइट’ भन्न थालिसकेका थिए । अर्थात् उनीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व अस्वीकार गरेका थिए ।
चुनावले माओवादीलाई तेस्रो शक्तिमा पुनःस्थापित गरिदिएको छ, विगतको भन्दा राम्रो नतिजासहित । यसमा गठबन्धनको ताकत किन नहोस्, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र प्रभु साहजस्ता हस्तीले छाड्दा पनि माओवादीले विगतको तुलनामा आफ्नो हैसियत बढायो । उसले आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाएको छ । स्थानीय चुनावले माओवादीलाई एक प्रकारको पुनर्जीवन दिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै ६० प्रतिशत स्थानमा जित हासिल गर्ने एमाले नेताको दाबी यथार्थमा बदलिन सम्भव भएन । एमाले विगतको तुलनामा धेरै सीट गुमाएर २ सयको हाराहारीमा रहने जस्तो देखिएको छ ।
शनिवार बिहान यो पंक्ति लेख्दासम्म नेपाली कांग्रेसले ३ सयभन्दा बढी स्थानमा जीत हासिल गरिसकेको छ ।
एमालेले गन्दै नगनेको माओवादी सवा सय स्थानमा जीतसहित सम्मानजनक तेस्रो दल बन्ने पक्कापक्की भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले कांग्रेससँग फराकिलो अन्तरसहित दोस्रो बनेको छ । एमाले कमजोर बनेको र माओवादीले आफ्नो सामर्थ्य बढाएका बेला फेरि दुई वामपन्थी मिल्छन् कि भन्ने चर्चा गाउँदेखि शहरसम्म भइरहेको छ । विगतमा पनि स्थानीय तह चुनावमा माओवादीले कांग्रेससँग तालमेल गरेको थियो र संसदीय चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्यो ।
चुनावमा तालमेल सफल भए/नभएको समीक्षा गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक शनिवार बस्दैछ ।
एमाले–माओवादी तालमेलका अनुकूल र प्रतिकूल पक्ष
स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल गर्ने/नगर्ने रस्साकस्सी चलिरहेको समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूलाई धेरै हेपिए एमालेसँग तालमेल गर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिए । कांग्रेसलाई घुर्की लगाउन पनि प्रचण्डले एमाले कार्ड फ्याँकेका थिए । तर, प्रचण्डको बोली भूइँमा खस्न नपाउँदै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जवाफ फर्काए– हामीले लिए पो तालमेल गर्ने !
शंकर पोखरेल एमालेभित्र माओवादीसँग तालमेल गर्न नहुने अनुदार धारको वकालत गर्छन् । त्यसविपरीत विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरू वामपन्थी तालमेलको प्रयास गर्नुपर्ने धारको नेतृत्व गर्छन् ।
चुनावको दिनसम्म एमालेमा माओवादीसँग मिल्न हुन्न भन्ने लाइन नै हावी थियो । स्वयं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत नेताहरूले चुनावपछि माओवादी पत्तासाप हुने जिकिर गरेका थिए । तर, चुनावको परिणाम आइनसकेको र नेताहरूले खासै सार्वजनिक रूपमा नबोलेकाले अहिलेको अवस्थामा धारणा के हो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।
चुनावमा घोषणापत्र समेत बनाउन नसकेको भन्दै ओलीले माओवादी पार्टी नै नभएको टिप्पणी गरेका थिए । बरु छोरी र भाइलाई जिताउने परिवार दल जस्तो भएको टिप्पणी उनले हरेकजसो सभामा दोहोर्‍याए ।
चुनावको मुखमा एमाले नेताहरूले गरेका भाषण पनि माओवादीलाई बिझाउने खालका थिए । परन्तु, एक अर्कालाई डाँडै काट्नेगरी आरोप प्रत्यारोप लगाएका नेताहरू एकै छिनमा साख्खै भइहाल्छन् । यो कम्युनिस्ट पार्टीको विशेषता हो । ‘आत्मालोचना’को एक शब्दले कम्युनिस्ट पार्टीमा सबै खत माफी हुन्छ ।
झण्डै ९ महिनापछि सुचारु भएको संसदमा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एकपटकको प्रतिगामी शक्ति सधैँ प्रतिगामी नहुने भन्दै एमालेसँग फेरि सहकार्य हुन सक्ने संकेत गरे । कुनैबेला प्रजातन्त्र दरबारमा लगेको आरोप लागेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै उनले एमालेसँग पूर्वाग्रह नरहेको बताए । चुनावबारे पार्टीभित्र समीक्षा नै नभएको अवस्थामा नारायणकाजीको अभिव्यक्ति संस्थागत नभई व्यक्तिगत मात्र हो । तर यसले माओवादी नेताहरूको मनोविज्ञान प्रतिविम्बित गर्छ ।
बिहीवार नै प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले वाम–लोकतान्त्रिक शक्ति मिल्दा शान्ति प्रक्रिया र संविधान बनेकाले देशको निकासको लागि गठबन्धन परसम्म जाने बताएका थिए । संसदमा ‘राता बराला’ एक ठाउँ हुनुपर्ने बहस चलेको थियो ।
चितवनको भरतपुर लगायतका बहुसंख्यक ठाउँमा कांग्रेसले माओवादी उम्मेदवारलाई भोट हाले पनि कतिपय ठाउँमा तालमेल सफल भएको छैन । जस्तो ललितपुर महानगरमा कांग्रेसका उम्मेदवारले मेयरमा फराकिलो मतान्तर बनाउँदा माओवादीका उम्मेदवारले अपेक्षित भोट पाएका छैनन् ।
कांग्रेस कार्यकर्ताले माओवादीलाई सहजै भोट हाल्दैनन्, त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण भरतपुर पनि हो, जहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले राम्रो मत ल्याएका छन् ।
वर्तमान गठबन्धनबाट माओवादी बिच्किने एउटै मात्र आधार र कारण यही हो । अन्यथा, माओवादीलाई यो गठबन्धन फापिरहेको छ ।
'डायनामिक' भर्सेस 'अस्थिर' प्रचण्ड
स्थानीय तह चुनावको नतिजाले माओवादी नेताहरू गरम र एमाले नेताहरू नरम सुनिन थालेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि स्थापित नेताका पालिका र वडामा एमालेले हार व्यहोरेको छ । अहिलेकै रेसियो अनुसार अगाडि बढ्दा काठमाडौं लगायत ६ महानगरमा एमाले शून्य हुने खतरा छ । ११ उपमहानगरमध्ये एमाले २ या ३ मा खुम्चिने अवस्था देखिँदैछ । जबकि गत स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले काठमाडौं र पोखराजस्ता ठूला महानगर र ७ उपमहानगर जितेको थियो ।
स्थानीय चुनावमा एमालेले लोकप्रिय मत ल्याएको छ, किन्तु अंकगणितीय जीत हारमा त्यो निर्णायक हुँदैन । कति मत ल्यायो भन्दा कति पालिकामा विजयी भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण सुनिन्छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो शक्ति बनेर पाँच वर्ष सरकार चलाउने आकांक्षा राखेका कांग्रेस र एमालेले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न माओवादीको सहयोग लिनु अपरिहार्य जस्तो देखिएको छ ।
त्यसैले आगामी निर्वाचनमा ‘निर्णायक शक्ति’ बन्न माओवादीलाई कसले रिझाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
सार्वजनिक खपतका लागि बाहिर जे भनेपनि अहिलेको नतिजाबाट माओवादी गद्‌गद् छ । विगतको भन्दा नतिजा खस्किन्छ कि भन्ने भयमा रहेको माओवादी विगतको तुलनामा राम्रो नतिजा आएकोमा खुसी छ ।
बुधवार संसदबाहिर दिएको प्रक्रियामा माओवादी नेता वर्षमान पुनले स्थानीय चुनावमा उत्साहजनक नतिजा आएको बताएका थिए । ‘धेरैले हाम्रो पार्टीलाई हेप्थे, हामी निर्णायक शक्ति हौं भनेर स्थापित भएका छौं,’ पुनले भनेका थिए ।
माओवादी कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेर सहकार्य गरिरहेको भए पनि भविष्यमा दुई वामपन्थी दल मिल्ने सम्भावनालाई स्वयं एमालेका नेताहरू पनि अस्वीकार गर्दैनन् ।
चुनावको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता गठबन्धनको भविष्य असार १७ गतेसम्म मात्र रहेको भनेर एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक स्टन्ट गरे । उनले आफूहरूले चाहे क्षणभरमा गठबन्धन भत्काउने दाबी गर्दै आएका छन्, त्यो अभिव्यक्तिमा कतै न कतै माओवादीसँग तालमेल हुन सक्ने आशय बुझ्न सकिन्छ ।
वैशाख २५ गते पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले माओवादीको नाम नलिई भनेका थिए, ‘बिरालो किन्नुपर्दैन भन्ने तपाईंलाई थाहा छैन ? जसले ठूलो कचौरामा दूधभात दिन्छ, उसैकहाँ जान्छ । हाम्रो क्रयशक्ति कांग्रेसको भन्दा बढी छ ।’ माधव नेपालप्रति निषेधको शब्द बोले पनि माओवादीसँग चुनावी तालमेलको सम्भावनालाई ओलीले पूरै निषेध गरेका छैनन् ।
२०७७ पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा आइपुग्नु र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र ओली आमनेसामने भइरहेका छन् । नेकपा सग्लो रहदा प्रचण्डले लगाएको १९ बुँदे आरोपलाई लिएर पार्टीभित्र कलह शुरू भएको थियो । त्यो विवाद बल्झिँदै जाँदा नेकपा विभाजन भयो । दुईतिहाइको सरकार ढल्यो । १९ बुँदे कुराको छिनोफानो नभई दुई पार्टी मिल्ने सम्भावना रहँदैन, तर चुनावी तालमेल भने हुन सक्छ ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटन गल्ती थियो भनेर ओली कमरेडले आत्मालोचना नगरी एमालेसँग सहकार्य हुने सम्भावना छैन,’ माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘हिजो नारायणकाजी कमरेडले के सन्दर्भमा सहकार्यको कुरा गर्नुभएको हो, त्यो पार्टीको आधिकारिक कुरा हैन ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई ‘प्रतिगमन’को संज्ञा दिएको माओवादी आगामी चुनावमा पनि यही एजेण्डा लिएर जाने रणनीति बनाउँदैछ ।
गठबन्धनकै निरन्तरताको पक्षमा प्रचण्ड !
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, विभिन्न पेशागत संगठन हुँदै स्थानीय तहको चुनावसम्म आइपुग्दा कांग्रेससँगको तालमेल फापेको प्रचण्डको आन्तरिक विश्लेषण रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेसँग तालमेल गरेर ‘पावर ब्रोकर’को भूमिका खेलेको भन्दै उनको आलोचना भइरहन्छ । कहिले आफूतिर कहिले एमालेतिर जाने रणनीतिलाई लिएर भरतपुरको चुनावी सभामा कांग्रेस नेताहरूले प्रचण्डलाई हायलकायल पार्ने प्रयास गरे ।
रेनुलाई आफूहरूले जिताउने तर प्रचण्डले गठबन्धनको सुनिश्चितताबारे बोल्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको शर्तले प्रचण्डलाई धर्मसंकट पर्‍यो ।
गठबन्धनलाई परसम्म लैजाने/नलैजाने भन्ने कुरा शीर्ष नेताले मात्र नभई कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले फैसला गर्ने जवाफ दिएर प्रचण्ड उम्के । प्रचण्डले त्यहाँ पनि कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने कुराको परीक्षण बाँकी रहेको बताएका थिए ।
कांग्रेसले माओवादीलाई भोट नहाले देश राजनीतिक दुर्घटनामा पर्छ भन्ने धम्की दिएका थिए ।
कांग्रेससँग प्रचण्डको त्यो घुर्की या धम्की फेरि वामपन्थी दल मिल्छौं भन्ने नै थियो । भरतपुरको मेयरमा माओवादी जीतहारको विषय अहिलेको सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न थियो । कांग्रेस सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन कांग्रेसका लागि आवश्यक रहेको भन्दै चितवनमा माओवादी जिताउन सक्दो प्रयास गरे ।
शनिवार बिहानसम्मको नतिजामा रेनु दाहालले फराकिलो अग्रता लिइरहेका कारण उनले जित्नेमा माओवादी ढुक्क छ । रेनुले जितेमा गठबन्धन परसम्म जानेमा कांग्रेस नेताहरू आशावादी छन्, तर पूरै भर परेका छैनन् ।
कांग्रेस नेताहरूमा संशय छ, पटक–पटक ‘क्रम भंग’ र चमत्कारको कुरा गर्ने प्रचण्डले कुनै पनि बेला ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ भन्दै वाम तालमेल गर्न सक्छन् ।
प्रचण्डको बाटो पनि त्यति सहज छैन, जति २०७४ सालमा थियो । २०७४ सालमा एमालेसँगको सहकार्य माओवादीका लागि पहिलो परीक्षण थियो । त्यो तालमेल शुरूमा सफल भयो, पछि असफल भयो । नेकपा विभाजनको कालमा एक अर्कालाई सिध्याउन खोजिएको इगो नेताहरूमा बाँकी नै छ ।
अर्को कुरा, नेकपा विवादमा आफूलाई साथ दिएका माधव नेपाललाई अलपत्र पारेर प्रचण्ड ओलीसँग मिलिहाल्ने सम्भावना पनि निकै न्यून छ ।
ओलीले बार्दलीबाट घोषणा गरिसकेका छन्, माधव नेपालबाहेकलाई मात्र पार्टीमा स्वागत छ । अहिलेका परिदृष्यले मंसिरको चुनावमा वाम तालमेल त्यति सहज देखिएको छैन ।
र, महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ वामपन्थी गठबन्धन बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषय यहाँका नेताहरूको मात्र हातमा नरहेको विश्लेषण पनि राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल फागुन २१ सम्म छ । तर त्यो समयमा नयाँ संसद् आउनका लागि मंसिरमा चुनाव हुनुपर्छ ।
कतिपयले ६ महिना कार्यकाल थप्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने बहस पनि थालेका छन् ।
तर, स्थानीय चुनावको नतिजाबाट हौसिएका प्रधानमन्त्री देउवा मंसिरको चुनाव सार्न तयार नहुने उनी निकट नेताहरू नै बताउँछन् ।
जति समय लम्बियो, त्यति नै गठबन्धनमाथि संकट आइरहने भएकाले देउवा समयमै चुनाव गर्नेमा दृढ छन् ।
मंसिर या वैशाख जहिले भए पनि चुनावअघिसम्म नेपालमा फेरि वामपन्थी दलबीच चुनावी तालमेलको कुराले राजनीति तताइरहने छ ।